I-OnePlus 6 kuvavanywa ngokugqithileyo. Uvavanyo lokuchasa | Iindaba zeGajethi
Kudala sayeka ukubukela ividiyo malunga novavanyo lokuchasa kwesixhobo esiphathwayo kwaye kule meko sinetafile imodeli entsha yenkampani yaseTshayina i-OnePlus, i-OnePlus 6. Luvavanyo olubalulekileyo abantu abaninzi kwaye bathambekele ekuboneni ii-smartphones ezintsha zibuthathaka kwaye azinjalo.
Okwangoku iglasi esetyenziselwa izikrini, iinxalenye zealuminium kunye neplastikhi yezixhobo eziphathwayo ziyanyangeka kukothuka, kodwa ayisiyiyo eyothusayo kuphela, nayo ukukrwela, amaqondo obushushu aphezulu, kunyanzelo oluyimfuneko lokugoba ngezandla zakho (uvavanyo lokugoba) kwaye nangokunjalo. Kwividiyo elandelayo siza kubona ukunganyangeki kwezi zinto zintsha OnePlus 6.
Le yividiyo apho basibonisa khona ukungcungcuthekiswa kancinci kwimodeli esandula ukukhutshwa ye-OnePlus:
Asithandabuzi ukuba ividiyo emalunga nemizuzu emi-5 inokwenzakalisa ubuntununtunu obungaphezulu kwesinye kwabo bakhoyo, kodwa kubalulekile ukuqaphela ukuba olu hlobo lweemvavanyo ezingaphaya kokutshatyalaliswa kwesiphelo lubonelela ngedatha enomdla ngokwenene ekuchaseni i-terminal. Kule meko ithile sibona indlela emelana ngayo nokuhlaselwa kweenqindi kunye nokuqina kweglasi engaphambili kwiindawo eziphambili njengesithethi okanye ikhamera yangaphambili.
Eminye ividiyo yile nto siyibonayo, uvavanyo olunzima lokunyamezela oluphela ngokuzama ukugoba isixhobo ngezandla zakho, eyaziwa ngokuba yi "bend bend" ukuba ekugqibeleni ingayiphumezi injongo yayo. Ngayiphi na imeko, into ebalulekileyo kukubona ividiyo yonke kwaye uzenzele izigqibo, kodwa ngokubanzi yi-smartphone enganyangekiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-OnePlus 6 kuvavanywa ngokugqithileyo. Uvavanyo lokuchasana
Ewe inyani kukuba ewe, ijongeka ngathi iyamelana kwaye intle kakhulu ukujonga ubuhle.